Uyazi ukuthi uluhlobo luni lwamamaski okufanele ulithenge nge-coronavirus？
Imaski yezokwelapha, imaski yabahlengikazi bezokwelapha, imaski yokuhlinza yezokwelapha, imaski yokuvikela yezokwelapha, i-N95, KN95, 3M, njll. Ngokuphathelene namagama omaskandi, abantu babekhishwa futhi bedidekile.
Izinhlobo zemaski ezijwayelekile zingahlukaniswa ngezigaba ezi-6 cishe ngokwezinga lokusebenzisa
Amamaski wokuhlinzwa wezokwelapha, imaski yokuvikela ezokwelapha, i-N95, FFP2 ingasetshenziselwa ukuvikela izikhungo zezokwelapha, i-KN95 ayikwazi ukusetshenziswa ezikhungweni zezokwelapha, kodwa abantu abavamile bangazikhetha.
Ungazikhetha kanjani izinhlobo ezahlukene zemask? Namuhla, ngizokwethula kuwe, ngivumele ukhethe ngokushesha imaskhi evumelana nawe.
Imaski ye-1.Medical / imaski yokunakekelwa kwezokwelapha
Amamaski wezokwelapha kanye nama-masks wokunakekelwa kwezokwelapha angamazinga kazwelonke, i-YY0969, futhi aklanyelwe futhi akhiqizwa kakhulu amabhizinisi. Ukuqanjwa kwayo ikakhulu indwangu engeyona eyokwelukiwa nephepha lokuhlunga.
Imaski enjalo ayikwazi ukuqinisekisa ukuguquguquka kwamagciwane we-pathogenic kanye nothuli, ayinakufinyelela ukusebenza kokucwengekileyo kwezinhlayiya namagciwane, futhi ayinakukuvikela ngempumelelo ukuhlasela kwamagciwane ngepheshana lokuphefumula.
Lolu hlobo lwemaski lukhawulelwe kusilinganiso esithile semishini yokuvimbela izinhlayiya zothuli noma ama-aerosols. Ngokuvamile isetshenziselwa ukunakekelwa okujwayelekile ezibhedlela, futhi umphumela wokuzivikela awunelisi kakhulu.
Amaski okuhlinza we-2.Medical
Amamaski wokuhlinzwa wezokwelapha kumele akhiqizwe ngokuya ngejwayelekile YY0469-2011. Uma izinga lebhizinisi elibekwe yibhizinisi lihlangabezana noma lidlula izidingo ze-YY0469, lingaphrintwa kwiphakheji yangaphandle yemaskhi.
Imaski yokuhlinza ihlukaniswe izingxenye ezintathu: ungqimba oluthatha amanzi olungaphakathi, ungqimba wokuhlunga ophakathi nendawo ungqimba lwamanzi olungaphandle. Umphumela wayo wokuhlunga ezinhlamvwini ezingekho ezinamafutha kufanele ube ngaphezu kwama-30%, futhi impahla yawo yokuhlunga kumagciwane kufanele ibe ngaphezulu kwama-95 (non-N95).
Ilungele ukuvikelwa okuyisisekelo kwabasebenzi bezokwelapha noma kwabasebenzi abahlobene, kungavimbela ukwanda kwegazi, uketshezi lomzimba kanye ne-splashes, futhi inemisebenzi ethile yokuvikela ukuphefumula. Amamaski wokuhlinzwa wezokwelapha angavimba iningi lamagciwane namagciwane futhi anciphise nengozi yokutheleleka ezibhedlela.
Isetshenziswa ikakhulukazi ezindaweni ezifuneka kakhulu zezokwelapha ezifana nemitholampilo yezokwelapha, indawo yokusebenzela kanye namagumbi okusebenza, okukhona nokuphepha okuphezulu nokumelana okunamandla namagciwane namagciwane. Isetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela ukusabalala komkhuhlane nezifo zokuphefumula.
Ama-masks we-KN asetshenziselwa ikakhulukazi ukuvikela izinhlayiya ezingezona ezinamafutha. Ngokuya ngezidingo ze-GB2626 ejwayelekile, ukuhlunga kwezinhlayiya ezingezona ezinamafutha kuhlukaniswe. Phakathi kwazo, i-KN90 ingaphezulu kwama-90% ento engeyona eyamafutha engenhla kwama-microbheli angama-0,075, i-KN95 ingaphezulu kwama-95% ento engeyona eyamafutha engenhla kwama-microboni angama-0,075, kanti i-KN100 ingaphezulu kwama-99.97% ento engeyona eyamafutha engenhla kwe-0.075. amagciwane.
Izidingo zamasks wohlobo lwe-KN ezintweni zokuhlunga ukuthi izinto ezixhumana ngqo nobuso azinabungozi esikhunjeni futhi izinto zokuhlunga azilimazi emzimbeni womuntu. Izinto ezisetshenziswayo kufanele zibe namandla anele futhi akufanele zikhubazeke noma zonakaliswe ngesikhathi sempilo ejwayelekile.
Uchungechunge olufanayo lwamamaski njenge-KN, nochungechunge lwe-KP, iyini i-KP?
I-KN yizinhlayiya ezingewona owoyela, futhi i-KP imaskhi yezinhlayiya ezinamafutha. I-KP90 / 95/100 iyefana ne-KN90 / 95/100 ku-KN.
Imaski ye-KN ne-KP ilungele kakhulu ukungcola okunamafutha nokungenzi okunamafutha okufana nothuli, umusi, inkungu nokunye okuveliswa ukucutshungulwa kwensimbi okungahambisani, i-metallurgy, i-iron ne-iron, i-coking, amakhemikhali we-organic, igesi, ukwakhiwa, nokuhlobisa . (Qaphela: futhi kungabizwa ngokuthi imaski yothuli)
Amaski wokuvikela we-4.Medical
Izinga lokuvikelwa kwezokwelapha laseChina yi-GB19083-2010. Akukho sitatimende se-N95 kuleli zinga, kepha ukuhlukaniswa kwezinga 1, 2, no-3 kusetshenziselwa ukukhombisa izinga lokuhlunga kahle.
Izinga 1 lingahlangabezana nezidingo ze-N95. Ngamanye amagama, inqobo nje yanoma imiphi imaski yokuvikela yezokwelapha ehlangabezana ne-GB19083 ejwayelekile, izofinyelela ekusetshenzisweni kokuhlunga kwe-N95 ne-KN95.
Umehluko phakathi kwamamaski wokuvikela ezokwelapha ne-KN95 ukuthi amamamaski wokuvikela ezokwelapha futhi anokungena kwegazi “okwenziwe” kanye “nezidingo zokuswakama komswakama”. Umphumela wokuvikelwa kwamamaski wokuvikela ezokwelapha egazini, uketshezi lomzimba kanye nolunye uketshezi wacaciswa, kepha lezi zinhlobo ze-KN azitholakali.
Ngakho-ke, imaski yohlobo lwe-KN ehambelana ne-GB2626 ayinakusetshenziselwa imisebenzi yezokwelapha, ikakhulukazi imisebenzi enobungozi obukhulu njenge-tracheotomy kanye ne-tracheal intubation engase ichitheke.
Amamaski wokuhlinzwa ezibhedlela kumele wonke ahlangabezane nezinga 1 nangaphezulu kwe-GB19083. Ingafinyelela i-95% yokuhlunga, futhi ingavimbela ukungena kwe-liquid.
Ngemuva kokusho lokhu, abantu abaningi bazobuza nokuthi, yini i-N95?
Izinhlobo eziningana zemaski ezethulwe ngenhla, imaski yezokwelapha kanye nama-masks okuhlinza okuhlinzwa alandela imigomo yezokwelapha, imaski yokuvikela ezokwelapha kanye namamodeli we-KN alandela amazinga kazwelonke, kanti i-N95 ilandela amazinga e-US.
Imaskhi ye-N95 ilandela i-American NIOSH42CFR84-1995 standard (NIOSH National Institute of Occupational Safety and Health). N ikhombisa ukumelana kawoyela bese kuthi ama-95 abonise ukuvezwa kwenombolo ethile yezinhlayiya zokuhlola ezikhethekile. Ukuhlushwa kwezinhlayiyana ku-maski kungaphezulu kuka-95% kunokwehla kwezinhlayiya ngaphandle kwemaskhi. I-95 akuyona isilinganiso, ingubuncane.
Uhla lokuhlunga lungezinhlayiya ezingewona owoyela, ezinjengothuli, inkungu ye-acid, ama-microorganisms, njll. Ukusebenza kwaso ukuvikelwa kwezifo ezithinta umoya zokuphefumula ezenziwa ngabasebenzi bezokwelapha nabasebenzi abahlobene, nokuvinjezelwa kokusakazeka kwegazi, uketshezi lomzimba kanye splashes ngesikhathi inqubo.
Amazinga e-NIOSH aqinisekisiwe amanye amazinga wamaski we-anti-protein futhi afaka: N95, N99, N100, R95, R99, R100, P95, P99, P100, okuyizinhlobo eziyi-9.
Qaphela: N-hhayi ukumelana ne-oyela, i-R-engahambelani ne-oyili, i-P — ayivimbi uwoyela.
Izidingo zobuchwepheshe nezindlela zokuhlola zalezi zigaba ezimbili zomaskandi we-KN95 kanye nezamaski N95 ngokuyisisekelo ziyefana, kodwa zingezindinganiso ezahlukahlukene zezwe.
I-N95 ilandela izinga laseMelika, kuyilapho i-FFP2 ilandela indinganiso yaseYurophu.
Amamaski we-FFP2 angenye yezindinganiso zemaski zaseYurophu EN149: 2001. Asetshenziselwa i-adsorb ama-aerosols ayingozi, kufaka phakathi uthuli, umusi, amaconsi amabi, amagesi anobuthi kanye nezinsiba ezinobuthi, ngokusebenzisa izinto zokuhlunga, ezivimba ukuthi zingangeni kubantu.
Phakathi kwabo, i-FFP1: Umphumela wokuhlunga ophansi kakhulu> 80%, FFP2: Umphumela wokuhlunga ophansi kakhulu> 94%, FFP3: Umphumela wokuhlunga ophansi kakhulu> 97%. Uma usebenzisa le datha ukukhetha imaskhi efanelekile lo bhubhane, ubuncane yiFFP2.
Indwangu yokuhlunga yemaski ye-FFP2 ihlukaniswe ikakhulu izendlalelo ezine, okungukuthi, izingqimba ezimbili zendwangu engalukwanga + ungqimba olulodwa lwendwangu yokufafaza yesolver + ungqimba olulodwa lukakoteni oluyimpandla.
Imaski yokuvikela i-FFP2 ingavikela ama-virus namagciwane amahle kakhulu, ngokusebenza kokuhlunga okungaphezulu kwama-94%, elungele indawo eshisayo nenomswakama noma evikela isikhathi eside.
Umbuzo wokugcina, yini imaski ye-3M?
Ama- “3M masks” abhekisa kuyo yonke imikhiqizo ye-3M engabizwa ngokuthi imaski. Zingahlukaniswa ngezigaba ezintathu: imaski yezokwelapha, imaski yokuvikela, kanye nemamasks afudumele afudumele. Uhlobo ngalunye lwamamaski lunokugxila okuhlukile kokuvikela.
Ama-3M amaski wokuvikela ezokwelapha enziwa eChina futhi angeniswa ezweni. Banezici zokuzivikela zamaski okuhlinza wezokwelapha futhi bahlanganisa imaskhi yokuzivikela. Zisetshenziswa ezibhedlela futhi zingahlunga imininingwane esemoyeni futhi zivimbele amaconsi, igazi, uketshezi lomzimba kanye nokuqunjelwa.
Phakathi kwamamaski ama-3M, lawo aqala ngo-90, 93, 95, no-99 amaski asebenza ngempumelelo ekuvikeleni izinhlayiya eziyingozi. Womabili ama-8210 kanye nama-8118 ahlangabezana nezidingo zokuvikelwa kweChina PM2.5. Uma ufuna ukukhetha ukuhlangana nezidingo zokuvikela umkhuhlane weWorld Health Organisation, khetha u-9010, 8210, 8110s, 8210v, 9322, 9332.
Ukubona lokhu, uyazi ukuthi ungayikhetha kanjani imaskhi ngesikhathi sodlame?
1, angakhetha imaski yokuhlinza yezokwelapha, zama ukukhetha imaski yokuhlinzwa.
I-2, ingakhetha imaski ngaphandle kwe-valve yokuphefumula, zama ukukhetha imaski ngaphandle kwe-valve yokuphefumula.
Wi-orld ukulwa! China ukulwa!